XAFIISKA QARAMADDA MIDOOBAY U QAABILSAN ARRIMAHASIYAASADDA SOMAALIYA
Ergayga gaarka ah ee Qaramadda Midoobay oo ammaanay wadahadalada ku saabsan cadaaladda iyo Dib u Heshiisiinta.
Jibuuti, 23 November 2008, Ergayga gaarka ah ee Qaramadda Midoobay u QaabilsanArrimaha Somaaliya, Ahmedou Ould Abdallah ayaa aad u ammaanay qabashadawadahadalada labada maalmood qaatay ee ku qotommay ka haddalka arrimaha culeyskabadan leh ee khuseya Caddaaladda iyo Dib u Heshiisiinta Soomaaliya.
“Dembi inta la galo haddana aan la isku raacaneynin”Impunity” waa masiibo bulshowalba haysato, sidaas darteed waxaan aad ugu farax sanahay in aan arko, markii uguhoraysay ee laga hadlaayo dhaqanka xun ee ahaa dembi gal haddana yaan laguuraacanaynin”, ayuu yiri Ahmedou Ould Abdallah. “Arrintan khusaysa inta dembi la galohaddana aan la isku raacanaynin waxaa aad ooga hadlay waddamo badan oo ka gudbayxilligii colaada, waxaana ka mid ah Burundi, Kamboodiya, Layberiya iyo Seera-liyon. Haddaba, waxaa la gaaray wakhtigii dadka Soomaaliyeed ay ka hadli lahaayeen arrintanku saabsan dembi gal-haddana yan laguu raacaynin iyo dembiyadii kaleyto ee dadkaSomaaliyeed ay kala galeen ilaa billowgii dagaalkii ahliga ahaa. Waxaan aad ugufaraxsanahay in dadka Soomaaliyeed iyo wakiilo ka socda bulshada caalamka ay hadda ushirsan yihiin si ay ooga haddlaan fal-dembiyeedkan.
“Waxaa kale ee aan ku faraxsanahay in aan ku dhawaaqo ka dib markii la qabtay shirkiisocday labada maalmood kuna saabsanaa caddaaladda iyo dDib u Heshiisiinta, labada dhinac ee isla galay Heshiiska Jibuuti, TFG “DawladdaFederaalka Ku-meel-gaarka ah iyo ARS “Isbahaysiga Dib u Xuraynta Soomaaliya” in ayku dhawaaqaan in ay si hoose isagala shaqeyndoonaan wax ka qabashada dhibaatada laxariirta “Dembi gal hadana iska soco” impunity”.
Si dhibkan loo dhammeeyo, waxaa la isku raacay sameynta guddi hawsha soo fududeyosi loo sameeyo wada-tashi bahsan, horsedi karana habkii wax looga qaban lahaadhaqanka ku saabsan “Impunity” dambi gal hadana iska soco. Dhinacyada waxay si gaarah ugu heshiiyeen in ay sameyaan Guddi baaritaan sameeya iyo Maxkamad Caalami ah.“Waxaan ugu baaqayaa dhammaan qaybaha ay arrintu khuseyso iyo bulshadacaalamkuba, in ay taageeraan iskaashiga ka dhexeeya dadka Soomaaliyeed si loo dhameeyo “Impunity”, Inta dembi laga hadana iska socodo si xur ah” ayuu OuldAbdallah.
Wadahadalka dadka Soomaaliyeed wuxuu dhacayaa wakhti burcad badeednimadu “waaarrin ka dhalatay (fowdada iyo dhaqanka ka jira Soomaaliya ) “impunity” dembi galhadana dembigaas laguu raacanaynin” “impunity” ay waxyeeleynayso marin-biyoodyadacaalamiga ah ee ka baxsan xeebaha Soomaaliya, taasoo wax u geysanaya arrimahadhaqaalaha iyo degaankuba, ayuu yiri Ahmedou Ould Abdallah.
For more information please contact: Susannah Price or Donna Cusumano,Public Information Officers, UN Political Office for Somalia (Nairobi, Kenya)Tel: +254 20 762 1192/1625 or +254 733902020/737400133Please visit: www.UN-Somalia.org